Mobile Jarjirrada Jarmalka ee loogu talagalay telefoonnada gacanta
Ciyaarta mobilada jarmalka ee mobilka .. kala duwanaanshaha almancax…
Isticmaaluhu wuxuu arkayaa hal erey iyo jimce 2. Haddii jawaabta saxda ah ay tahay erayga dhinaca bidix, user ayaa cadaadin doona furaha LEFT ee telefoonka gacanta. Haddii ikhtiyaarka kale uu sax yahay, isticmaaluhu wuxuu cadaadiyaa furaha hagida RIGHT. Dhibcaha waxaa lagu helaa jawaabo sax ah.
Waxaa lagu rakibi karaa telefoon kasta oo taageera codsiyada Java, waa gebi ahaanba bilaash ah, suurtagal maaha in laga jaro kumbuyuutarradaada.
almancax adeega iyo horumarinta Java by Murat Inan verilmektedir.t gebi ücretsizdir.alman kulan waxbarasho oo aad ka ciyaari kara wakhti kasta oo aad rabto in aad soo degsado in aad telefoon mobile, waxaad baran kartaa erayo cusub Jarmal.
Ereyga Jarmalka ee Turkiga waa mid fudud oo faa'iido leh.
Intaa waxaa dheer in aad haysatid taageerada java ee telefoonkaaga gacanta, waxaad kaloo u baahan tahay inaad awood u leedahay inaad ku darto ciyaaraha dibadda.
Haddii aad ka soo dejisanayso faylka laga soo qaaday bogga oo aad u gelisid faylka munaasibka ah ee taleefanka gacanta, waxaad si fudud u ciyaari kartaa ciyaarta.
Waxaan kuu rajeyneynaa inaad ku guuleysato sidii kooxda almancax.
Riix halkan si aad u soo dejiso Barnaamijka / File
Xusuusin: Barnaamijkan waxaa lagu qaybiyaa lacag la'aan almancax. Adoo soo dejinaya barnaamijka
Waxaad heli doontaa adeegsi bilaash ah oo aan xadidneyn. Sababtoo ah waxaad isticmaashaa barnaamijka, marna hoos uma dhicin amaahda khadkaaga ama kordhinta biilkaaga.